October 2017 – Page 11 – Thadin Media
(၁၀)တန်းကျောင်းသူကို နောက်မှနေ၍ လုံချည်အား ဆွဲလှန်ပြီး တင်သား ဆွဲညှစ်ယုံမက ကောင်းလားအော်မေးတဲ့ သူကို ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီ
October 5, 2017 adminCrime, Local News
<Zawgyi/> (၁၀)တန်းကျောင်းသူကို လုံချည်အားနောက်မှနေ၍ ဆွဲလှန်ပြီး တင်သား ဆွဲညှစ်ယုံမက ခက်ဝေးဝေးမှ ကောင်းလားအော်မေးတဲ့ သူကို ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီ သာခိုင်(မုနိမြေ), မှုခင်းရှုထောင့်ဂျာနယ် ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ( ၅ ) ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ(၄)ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီအချိန်ခန့်တွင် အောင်ပန်းမြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် အေးမြင့်သာယာရပ် နယ်မြေ(၂)တွင် လှည်းရိုးရပ်ကွက်ရှိ အထက(၈)တွင် ဒသမတန်း(ဘီ)ကျောင်းသူ (ဗုဒ္ဓဘာသာ) တစ်ဦးအား လုံချည်အားနောက်မှနေ၍ ဆွဲလှန်ပြီး တင်းသား ဆွဲညှစ်ထွက်ယုံမက ခက်ဝေးဝေးမှ ကောင်းလားဟု အော်မေးတဲ့ သူကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း အောင်ပန်းမြို့မရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။…
October 5, 2017 adminSports News
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းဟာ ထိုင်းလက်ရွေးစင်အသင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ချေစမ်းကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းအတွက် အခက်အခဲဆုံးပြိုင်ဘက် ထိုင်းအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး ကစားကြည့်မယ့် ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်မှာ မန္တလေး၊ မန္တလာသီရိအားကစားကွင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပြီး။ လက်မှတ်တွေလည်း ကြိုရောင်းနေပါပြီ။ ညနေ့ ၆ နာရီခွဲမှာ ကစားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ထိုင်း လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ချာနာသစ် တီရက်ဆဲ ဒန်ဒါအပါအဝင် ထိပ်တန်း ကစားသမားများ အာဆီယံအကောင်းဆုံး ကစားသမားများ ပါဝင်လာမှာဖြစ်သလို မြန်မာအသင်းမှာလည်း အောင်သူ ကျော်ကိုကို ကြည်လင်း မျိုးကိုထွန်း…
အသက်အရွယ် အကန့်အသတ်နဲ့ ကြည့်ရှု့ရမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကယ်ဒမီ လူမင်း
October 5, 2017 adminLocal News
အသက်အရွယ် အကန့်အသတ်နဲ့ ကြည့်ရှု့ရမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကယ်ဒမီ လူမင်း မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ အသက်အရွယ် အကန့်အသတ်နဲ့ ကြည့်ရှု့ရမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ အကယ်ဒမီ လူမင်းက ပြောပါတယ်။ ကျော်ဇေယျ သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ Credit : tv.dvb.no
ခုချိန်ထိ ရည်းစားမရသေးလို့ အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ အပြောအဆို ခံနေရတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို
အဆိုတော် ပိုပိုတစ်ယောက်ကတော့ ခုချိန်ထိ ရည်းစားမရသေးလို့ သူ့ရဲ့ အဒေါ်ကတောင် ပြောတာခံနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကို သူမ ကိုယ်တိုင် ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုက ဗုဒ္ဓဟူး သမီးဖြစ်ပြီး စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုချော့တာပဲ ကြိုက်ပြီး တစ်ဖက်လူကိုတော့ ပြန်မချော့တတ်လို့ ရည်းစားရဖို့ ခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “တစ်နေ့မှာ ၃ ခါလောက် စိတ်ပြောင်းနေတာကိုး ရူးတယ် ပြောလဲ လက်ခံတယ် အဒေါ်ကလဲ ပြောရှာတယ် နင်ရည်းစား ဘယ်ရမလဲတဲ့ ခဏနေ လာခဲ့ ခဏနေ စိတ်က…
October 4, 2017 adminKnowledge, Local News, Political
မြန်​မာ့​တပ်​မ​တော်​ကို လွယ်​လွယ်​နဲ့ စမ်းလို့ရမယ်​ ထင်​ပါသလား….?
October 4, 2017 adminPolitical
<Zawgyi/> နိူင်​ငံတိုင်းမှာ စီးပွား​ရေး​တောင့်​တင်းမှ လုံ​လောက်​တဲ့ တပ်​မ​တော်​ အင်​အား ​တောင့်​တင်းမှ ဘယ်​နိူင်​ငံမှ မ​စော်​ကားရဲမှာ……။ တိုင်းပြည်​စီးပွား​ရေး​တိုးတက်​ဖို့ဆိုတာကလဲ ပြည်​ပစီးပွား​ရေး လမ်း​ကြောင်း​တွေ ပြည်​ပရင်းနှီး မြုပ်​နှံမှူ့​တွေကလဲ တစ်​နည်းအားဖြင့်​ အဓိကကျတယ်​…..။ တပ်​မ​တော်​အင်​အား ​တောင့်​တင်းရင်ဘယ်​နိူင်​ငံကမှ မ​စော်​ကားရဲဘူး ဘယ်​နိူင်​ငံကမှ မ​စော်​ကားရဲမှ စီးပွား​ရေး အခွင့်​အလမ်း ပိတ်​ဆို့မှူ့​တွေနည်းမှာ….ဒါကို ဟိုလူတစ်​စုသိဖို့လိုတယ်​….။ သူများ​ယောင်​တိုင်းလိုက်​​ယောင်​ မိမိနာမည်​ လူသိများဖို့အတွက်​ တပ်​မ​တော်​ကို လွှတ်​​တော်​ထဲမှာ ​စော်​ကားမှူ့​တွေရပ်​သင့်​ပီ….။ အခြားနိူင်​ငံ​တွေနဲ့ ယှဉ်​ကြည့်​ရင်​မြန်​မာဟာ စစ်​အသုံးစားရိတ်​ နည်းလွန်းတယ်​….ဒါ​ပေမယ့်​ ကမ္ဘာ့နိူင်​ငံ​ပေါင်း ၂၀၀ ​ကျော်​မှာ စစ်​အင်းအား အဆင့်​…
October 4, 2017 adminCrime, Local News, Political
<Zawgyi/> အာဇာနည်ဗိမ္မာန်မှာလျှောစီးနေတာအမြင်မတော်လို့ပါ ဆိုပြီးတော့ ပေးပို့လာတာပါ. မြင်ရတာ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး ဖြစ်ချင်သလိုကို ဖြစ်နေကြတော့တာပါပဲ … အရေးယူချင်ရင် ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လည်း အရေးယူနေကြပြီး အရေးမယူချင်ရင် ဘာမှကို မဟုတ်သလို နေတတ်ကြတာပါပဲ။ Credit :Zin Moe <Unicode/> အာဇာနညျဗိမ်မာနျမှာလြှောစီးနတောအမွငျမတျောလို့ပါ ဆိုပွီးတော့ ပေးပို့လာတာပါ. မွငျရတာ စိတျတောငျမကောငျးဘူး ဖွဈခငျြသလိုကို ဖွဈနကွေတော့တာပါပဲ … အရေးယူခငျြရငျ ဘာမဟုတျတာလေးနဲ့လညျး အရေးယူနကွေပွီး အရေးမယူခငျြရငျ ဘာမှကို မဟုတျသလို နတေတျကွတာပါပဲ။ Credit :Zin Moe
ကွန်ဒုံးသုံးကြပါဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်အမှာစကား(မိန်းကလေးများအထူးဖတ်သင့်သည်)
October 4, 2017 October 4, 2017 adminKnowledge
<Zawgyi/> မိန်းမသားတို့၏သဘာဝမှာ ဟိုစပ်စပ် သည်စပ်စပ်နှင့် လူရာဝင်တတ်သော၊ စကားကြွယ်သော၊ ဖော်ရွေသောယောက်ျားသူငါများကို ခံတွင်းတွေ့ တတ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရောတ၀င် ကြည်ဖြူတတ်ကြပါသည်။ ထိုအခါ ယောက်ျားများအကြိုက်ကို တစ်ခါတစ်ရံ အလိုက်ပေး ပေါင်းသင်း တတ်ကြရာကမမှားသင့်သည်များ မှားယွင်း သွားတတ်ကြပါသည်။ အခွင့်အရေးသည် နေရာတကာ မပေးကောင်းပေ။အခွင့်အရေး ယူတတ်သူများနှင့် ကြုံလျှင်သာ ဆိုးတတ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဖြစ်ရပ်ကလေးတစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းလက်လုပ်လက်စား မိန်းမ တစ်ဦး၏ ကိုယ်တွေ့ ရင်ဖွင့် ပြောပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခသည်များ ကို စောင့်ရှောက်ရင်း သူတို့ ရင်ဖွင့် စကားများ…